Dowladda Turkiga oo war kasoo saartay Weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen Xarunta Degmada Hodan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Turkiga oo war kasoo saartay Weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen Xarunta Degmada Hodan
Ardaan Yare 11 September 2018 11 September 2018
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Dowladda Turkiga ayaa waxa ay ku cambaareysay Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu qaaday xarunta Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Waxaa lagu sheegay bayaanka in Dowladda Turkiga ay aad uga xun tahay falkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawacyo oo soo gaaray dad aan waxba galabsan iyo masaajid ku yaallay Xarunta Degmada .
Sidoo kale bayaankaasi ka soo baxay Dowladda Turkiga ayaa lagu sheegay in falka noocan ah uu waxyeelaynayo sugnaashaha nabadgelyada ee Soomaaliya,waxayna Tacsi u dirtay Xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxayna ilaah ugu barisay dadkii shilkaasi ku dhaawacmay caafimaad ded deg ag.
Weerar ismiidaamin ah ayaa waxa shalay lagu qaaday Xarunta Degmada Hoden ee Gobolka Banaadir,kaasi oo waxyeelo ay ka soo gaaray dad isugu jiray Askar iyo Shacab oo xiliga uu qaraxa dhacayay ka agdhawaa goobta,waxaa sidoo kale goobtaasi ku bur buray masaajid ku yaalla Xarunta Degmada Hoden,waxaana weerarkaas mas’uuliyadiisa sheegtay Ururka Al Shabaab.
UAE’s malicious role in 9/11 attacks needs scrutiny
UAE: DP World to defend its rights over Djibouti’s Doraleh Container Terminal